I-Arduino yohlelo lokufundisa | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Isifundo sokuhlela se-Arduino
I-Arduino Cishe ingenye yamaphrojekthi wamahhala wesoftware ne-hardware noma amapulatifomu kanye nalokho okube nomthelela omkhulu emhlabeni we-DIY. Umphakathi udale isoftware yomthombo ovulekile yohlelo lwe-microcontroller yamabhodi, kanye namabhodi wehardware ahlukene akhululekile ukusebenza nawo. Zonke zinelayisense ngaphansi kwelayisense le-GNU GPL ukuze inqwaba yezengezo nezisuselwa kuzo nazo zingadalwa.
Eqinisweni, bavuse yonke imboni ye-elekthronikhi ngobuningi bezesekeli, izigqoko noma izihlangu Ngalokho unganweba amandla webhodi yakho ye-Arduino ngaphezu kokusebenza kwayo okuyisisekelo okukusebenzisa njengokujwayelekile. Amakhithi amaningi asethulwe ngawo ukuqala noma ukwenza amaphrojekthi akhetheke kakhulu, njengamakhithi ama-robotics, amakhithi wamaphrojekthi anamandla elanga, ama-starter kits, njll.
1 Yiziphi izinhlobo zamapuleti akhona?
2 Yini engikudingayo ukuze ngiqale?
3 Isifundo sokuhlela se-Arduino:
3.1 Lifaka ini ifayili lokulanda?
3.2 Landa i-eBook yamahhala nezengezo:
Yiziphi izinhlobo zamapuleti akhona?
Kukhona amabhodi ahlukahlukene asemthethweni e-Arduino, yize ukuqala ngincoma ukusebenzisa Arduino UNO, engikusebenzisayo njengesisekelo sesifundo. Amapuleti ahlukahlukene avelele kakhulu yilezi:
Arduino UNO Isambiso3: yipuleti eliguquguqukayo futhi elisetshenzisiwe kunakho konke, okuphakanyisiwe ukuqala ngakho. Ine-microcontroller engu-328Mhz ATmega16, i-2KB ye-SRAM ne-32KB ye-flash, izikhonkwane eziyi-14 ze-I / O zedijithali nokufakwa kwe-analog okuyi-6.
Arduino Ngenxa: Ine-microcontroller ye-AT91SAM3X8E ene-84 Mhz, 96KB ye-SRAM, ne-512 KB ye-flash, ngakho-ke uzokwazi ukuqopha izinhlelo eziyinkimbinkimbi zamaphrojekthi amakhulu. Ngokunjalo, uzothola ukuxhumana okungama-54 kwedijithali kwe-I / O nokufakwayo okungu-12 kwe-analog + nemiphumela emibili ye-analog.
I-Arduino Mega: 2560Mhz ATmega16 microcontroller, 8KB of SRAM, 256KB of flash, 54 digital I / O pin and 16 analog input. Ngamanye amagama, kungaba imodeli ephakathi nendawo phakathi kwe-Ngenxa ne-UNO, kumaphrojekthi wobunzima obuphakathi nendawo.
I-Arduino Lilypad: Ipuleti elincane, eliyindilinga eliguquguqukayo kumaphrojekthi wakho we-e-textile, okungukuthi, okugqokekayo ongakugqoka izingubo. Kuyabhalwa.
I-Arduino Micro: Ibhodi elincane kakhulu eline-microcontroller elingaba wusizo lapho isikhala siyinto ebalulekile futhi udinga ibhodi elithatha isikhala esincane ukulifaka ngaphakathi kwesikhala esincane. Kukhona i-Pro version yayo enamakhono athuthukisiwe. Kufaka phakathi i-microcontroller engu-32Mhz ATmega4U16, nezikhonkwane ezingama-20 ze-I / O ozodinga ukuzidayisa.
U-Arduino Nano: yibhodi elincane kakhulu kuneMicro, kepha enezici ezifanayo nentengo, ene-microcontroller ye-ATmega328.
I-Arduino Esplora: Ibiza kancane ukwedlula iningi langaphambilini, isuselwe kuLeonardo wakudala, onamakhono afanayo ne-UNO futhi okuyi-plate yokuqala eyavela. Kepha ukwakhiwa kwayo kuvuselelwe, kwehlisiwe futhi kwahluka ngokuthi ezinye izinkinobho, induku yokudlala encane, nezinzwa kuhlanganiswe ngqo ebhodini. Ngakho-ke, kuyathakazelisa ngamaphrojekthi wokudlala.
Uzothola futhi amapuleti angekho emthethweni, eyenziwe umphakathi noma ezinye izinkampani. Izici zayo zingafana kakhulu, futhi zihambisane ne-Arduino maqondana nezinhlelo noma izinga le-elekthronikhi, kepha sesivele sikushiya lokho njengokunye ukukhetha kwakho. Angikukhuthazi ukuthi uqale ngalawa mabhodi aphuma kunoma iyiphi indlela, ngoba kungaba nezinto ezithile ezingahambelani futhi ngeke uthole usizo oluningi. Futhi, ezinye zazo zicaciselwe amarobhothi, ama-drones, njll.
Ngakolunye uhlangothi, une izesekeli zikagesi lokho kuzohlinzeka ibhodi yakho ye-Arduino ngamakhono athe xaxa, njengokuxhuma kwe-WiFi, i-Bluetooth, abashayeli bokulawula izinjini, njll. Ezinye zezihlangu ezaziwa kakhulu yilezi:
Isihlangu Wifi: ukwengeza ukuxhumeka kwe-WiFi futhi ukwazi ukuxhuma iphrojekthi yakho kwi-Intanethi ukuyiphatha kude.
Isihlangu GSM: yokuxhuma idatha yeselula.
Isihlangu i-Ethernet- Uxhumano olunentambo kunethiwekhi.
Isihlangu Proto: ikuvumela ukuthi usebenzise ibhodi lesinkwa kumiklamo yakho.
Futhi okuningi ngaphezulu, njengezikrini, amakhibhodi, ...
Ngokomthetho, ngoba qala, Angicabangi ukuthi ungaba nentshisekelo kulolu hlobo lwento, yize uzoludinga kamuva.
Yini engikudingayo ukuze ngiqale?
Ukuqala, Ngikweluleka ukuthi uthole lokhu okulandelayo:
Isiqalo se-Arduino Kit: kuyikhithi yokuqalisa ephelele ephelele equkethe ipuleti Arduino UNO, ibhukwana eliphelele kakhulu nobuningi bezinto ezisebenza ngogesi (ama-resistors, ama-capacitors, izikrini ze-LED, izibonisi, i-breadboard, ama-LED, izintambo, ama-diode, ama-transistor, ama-buzzers, ama-motors nama-servomotors, abashayeli, njll.
Uma ukhetha ukuthenga eyodwa yamapuleti ashiwo ngenhla, khumbula ukuthi kuzofanele uthole i- impahla kagesi kudingekile kuphrojekthi ngayinye uwedwa ezitolo ezikhethekile… Kungenzeka futhi ukuthi uma ususebenzise kabi ikhithi yokuqalisa, unentshisekelo yokuthenga izinto eziningi ukuze uqhubeke nokwandisa amaphrojekthi akho noma wenze izinto ezingaphezu kwalokho okukuvumela ukuthi le khithi ikwenze.
Ngaphandle kokwenyama, futhi kungathakazelisa uma une-software eyanele:
I-Arduino IDE: ungakwazi landa ngamapulatifomu ahlukahlukene ngokuphelele mahhala. Esifundweni se-PDF ngichaza ukuthi ungayifaka kanjani ohlelweni ngalunye lokusebenza nokuthi lusebenza kanjani.
I-Ardublock: kungenye i-plugin eJava yamapulatifomu amaningi angaba futhi ilayishiwe mahhala. Ikuvumela ukuthi usebenze ngemidwebo, okusho ukuthi, usebenzisa amabhulokhi afana nezicucu ze-puzzle ukubhala izinhlelo zakho ngaphandle kokusebenzisa ulimi lohlelo. Konke lokhu kuchazwe naku-PDF.
Kuyamangaza: wuhlelo olukuvumela ukuthi wenze ukulingisa noma izibonelo zamasekethe wakho ngaphambi kokuwahlanganisa. Kuyathakazelisa kakhulu futhi kufaka phakathi izinto eziningi phakathi kwemitapo yolwazi yedivayisi yayo. Landa lapha.
Ngalokho, uzoba nokuningi okungaphezulu kwe- sekwanele ukuqala…
Isifundo sokuhlela se-Arduino:
Yize ipulatifomu ineminyaka isebenza, kungahle kube khona abantu abasha abasha noma cha abasifundile manje futhi abafuna ukujoyina umphakathi omkhulu wabenzi abakhona ukudala amaphrojekthi asuselwa ku-Arduino okwamanje. Ngakho-ke, uma ufuna ukuqala ukufunda ukwenza uhlelo kusuka ekuqaleni futhi igxathu negxathu, ngikunikeza i-ebook yamahhala kuhlelo lwe-Arduino. Ngayo uzofunda konke okudingayo ukuqala ukwakha imiklamo yakho yokuqala ...
Lifaka ini ifayili lokulanda?
Ngaphakathi Landa i-ZIP uzothola amafayela amaningi ozosebenza nawo:
I-eBook enesifundo Izinhlelo ze-Arduino IDE ne-Ardublock nge-PDF ejwayelekile ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kwi-PC yakho.
I-eBook iyafana neyangaphambilini, kepha ngosayizi omncane futhi engasindi ongayisebenzisa kusuka kumadivayisi wakho weselula.
Landa izixhumanisi nge izinhlelo kudingekile.
Ifolda enehlukile amafayili womthombo wokudweba ongazama njengezibonelo noma uguqule ukuze ufunde. Kukhona womabili amakhodi we-Arduino IDE kanye namanye we-Ardublock kanye namanye amakhodi wokusebenza ngokubambisana ne-Raspberry Pi.
Landa i-eBook yamahhala nezengezo:
Qala ukulanda lapha:
Ngiyethemba kuyakusiza futhi uqala ukuba ngumenzi amaphrojekthi akho okuqala. Ungashiya imibono ngemiklamo yakho yokuqala bese wabelana ngendalo yakho nathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Isifundo sokuhlela se-Arduino
Sanibonani Ntambama Enhle:
Ubudinga ukwenza i-TESTER ethatha amanani amabili we-Capacitor kanye nokumelana ngokufana nomhlabathi C = 470Mfx50V, R = 330k 1 / 4W, lokhu kuxhunywe kokufakwayo nokukhishwayo 3.5 AUDIO Jack
Ngokusebenzisa Umbuzo 3.5
umbuzo ku-arduino ungenza okuthile okulinganisa nokukhipha amanani,
UMario Piñones c. kusho
Ngiyaqala futhi ngihlose ukuthola imiphumela emihle
Phendula uMario Piñones c.
kwenza Amaviki angu-2
Ukulanda kwakho kwe-Arduino EBOOK akusebenzi
Ngisanda kuzama futhi kuyangisebenzela. Kuyiqiniso ukuthi isikhangiso siphuma kuqala.
Kodwa okwesibili uchofoza isixhumanisi esilandayo.
I-Arduino + module edluliselwe ne-rock & roll: ukuxuba i-AC / DC
Zenzele eyakho iphinikhodi yekhamera